Olunye usizo emabhizinisini akhahlanyezwe yizibhelu. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Lolu sizo luwuR3.75 billion kanti luhlanganiswe yimali eqhamuka kulo mNyango nezikhungo zikahulumeni zokuthuthukisa amabhizinisi i-Industrial Development Corporation (i-IDC), iNational Empowerment Fund (iNEF) neSmall Enterprise Finance Agency (iSefa), uphiko lwe-IDC oluqondene namabhizinisi amancane.
Emva kwalezi zibhelu ezicekele phansi izinhlaka zomnotho ngemva kokuthi abantu bavuka umbhejazana bagasela ezitolo ukutapa izimpahla, UmNyango wezoHwebo, iziMboni nokuNcintisana wenze ucwaningo nokuphendule kulo osomabhizinisi abawu-1 200.
Okhulumela lo mNyango, uMnu uBongani Lukhele, uthi kulaba osomabhizinisi bawu-900 abathinteke ngqo kulo monakalo.
“Umonakalo bathi ungaphezu kukaR5 billion kanti imisebenzi ethintekile iwu-10 200 ikakhulukazi embonini yezokukhiqiza, izitolo neyama-service. Abawu-43% kubona bathe kuzobathatha isikhathi esingaphansi kwenyanga ukuthi bavuke, kwathi u-7% wathi kuzothatha unyaka noma ngaphezu kwawo,” kusho yena.
Lolu sizo lwemali luhlanganiswe ngezindlela ezihlukene njengoba enye kuzoba yizibonelelo kuthi enye kube yimali ebolekisayo. Enye kule mali ebolekisayo ngeke ibe nenzalo, enye ngeke ibe nayo uma uzokwazi ukuyikhokha ngonyaka kanti enye inzalo ngeke yeqe ku-5%. Kweqhamuka kwi-IDC kukhona uR100 million ozoba yizibonelelo okuzosizwa ngawo izinkampani ezisemalokishini, ezisemakhaya nasemadolobheni amancane. UR1.4bn wona kuzobolekiswa ngawo ngezindlela ezihlukene kanti inkampani ngayinye ingabolekwa imali engeke yeqe kuR30m.
Amabhizinisi acekelela phansi ayaqhubeka nokuthola usizo
Lesi sikhungo sizolekelekela nangoR10m esizonikela ngawo ukusiza ukuthi kungashodi ukudla. Kunesikhwama sikaR400m i-IDC ezolekelela ukusilawula, sona esizogxila ukusiza izinkampani ezisembonini yokukhiqiza.
ULukhele uthe usizo lweNEF lona kuzoba yimali ebolekisayo engeke yeqe kuR10m kanti ngeke ibe nenzalo. Inkampani izonikezwa iminyaka emihlanu ukuyikhokha.
“U-30% waleyo mali kungenzeka uguqulwe wenziwe isibonelelo kodwa leso yisinqumo esizokwenziwa yiNEF kanti loko ngeke kweqe kuR3m inkampani ngayinye,” kusho uLukhele.
Enye yezinto ezizokwenziwa yiSefa wukulekelela abahwebi abancane, okukhona kubona nabadayisi basemgwaqweni, ngesibonelelo esiwuR3 000. Kuthiwa bawu-8 000 abazohlomula kuloku. Lukhona nakuyona usizo lokubolekisa ngemali ezoba wu-40% oyisibonelelo bese kuthi u-60% kube ngebolekiwe kanti inzalo yakhona ngeke yeqe ku5%.
ULukhele uthe lolu sizo luyingxenye yosizo olumenyezelwe wumNyango wezeziMali emasontweni amathathu edlule.
Selulonke usizo oluhlinzekelwe ukubhekelela lo monakalo wuRR38.5bn. Kule mali, uR31.2bn yimali entsha, uR2.65bn uzothathwa kwezinye izinhlelo kuthi uR5bn yimali yentela yezisebenzi izinkampani ezizovunyelwa ukuthi zingayikhokhi izinyanga ezintathu.
Abafisa ukuthola usizo bangaxhumana nezinhlaka ezingezansi:
I-DTIC ngqo: recovery@thedtic.gov.za noma ushayele u-0800 006 543
I-IDC: recovery@idc.co.za noma ushayele u-011 269 3111
I-NEF: recovery@nefcorp.co.za noma ushayele u-0861 843 6333
I-Sefa: BRP@sefa.org.za noma ushayele u-0860 663 7867